Football Khabar » गोल्डेन बुट दौडमा रोनाल्डो र सिरोबीच रोचक भिडन्त : कसले मार्ला बाजी ?
गोल्डेन बुट दौडमा रोनाल्डो र सिरोबीच रोचक भिडन्त : कसले मार्ला बाजी ?
जारी सिजन युरोपियन गोल्डेन बुटका लागि प्रतिस्पर्धा थप रोमाञ्चक बनेको छ । हालको अवस्थामा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखका रोटवर्ट लेवान्डोस्की ३४ गोलसहित सबैभन्दा अगाडि छन् । तर, उनलाई इटालियन सिरी ए लिगका दुई खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो (युभेन्टस) र सिरो इम्मोबाइल (लाजियो) ले नजिकबाट पछ्याइरहेका छन् ।
हाल लेवान्डोस्की ३४ गोलसहित पहिलो स्थानमा रहँदा उनलाई सिरोले ३१ गोलसहित पछ्यारहेका छन् भने रोनाल्डो ३० गोलसहित दौडमा छन् । पछिल्लोपटक सिरोले क्याग्लिअरीविरुद्ध १ गोल गरेर रोनाल्डोलाई १ गोलले पछि छाडे भने सोही दिन रोनाल्डोले उडिनेसविरुद्ध गोल गर्न सकेनन् । र, उनी पछि परे । सो खेलअघि दुवैको समान ३०–३० गोल थियो ।
अब लेवान्डोस्कीलाई कसले भेट्छ वा बराबरी गर्छ भन्ने कुराको छिनोफानो अन्तिम ३ खेलबाट हुनेछ । सिरी ए लिगमा अझै अन्तिम तीन चरणका खेल बाँकी छन् । हालको अवस्थामा सिरोलाई लेवान्डोस्कीको ३४ गोल बराबरी गर्न ३ गोल र उछिन्न ४ गोल चाहिन्छ । यता, रोनाल्डोलाई भने लेवान्डोस्कीसँग बराबरी गर्न ४ गोल र उछिन्न ५ गोल चाहिन्छ । सिरो र रोनाल्डो दुवैका लागि अन्तिम ३ खेल निर्णायक हुनेछ ।
हालको अवस्थामा सबैभन्दा दबाबमा रोनाल्डो छन् । ३५ वर्षका उनी करिअरमा पाँचौंपटक गोल्डेन बट जित्ने दौडमा छन् । उनी बाँकी ३ खेलबाट सकेसम्म धेरै गोल गरेर लेवान्डोस्कीलाई उछिन्ने दाउमा छन् । तर, त्यसअघि उनले पहिला आफ्नै लिग प्रतिस्पर्धी सिरोलाई पछि पार्नुपर्ने हुन्छ । यदि सिरोले गोल संख्या बढाए रोनाल्डोका लागि कठिन हुनेछ ।
रोनाल्डोले खेल्न बाँकी खेल–
युभेन्टस भर्सेस साम्पडोरिया
क्याग्लिअरी भर्सेस युभेन्टस
युभेन्टस भर्सेस रोमा
सिरोले खेल्ने बाँकी खेल–
भेरोना भर्सेस लाजियो
लाजियो भर्सेस ब्रेसिया
नापोली भर्सेस लाजियो
प्रकाशित मिति १० श्रावण २०७७, शनिबार १६:५९